Iindaba - Ukuthintela njani iingozi ezinokubakho ekusebenzeni kweetanki zokugcina i-ammonia ezicocekileyo?
Itanki yokugcina i-ammonia yolwelo
I-ammonia yolwelo ibandakanyiwe kuluhlu lweekhemikhali eziyingozi ngenxa yokutsha kwayo, uqhushumbo kunye neempawu eziyityhefu. Ngokutsho "Ukuchongwa kweMithombo eNgcaciso yeMichiza enobungozi" (i-GB18218-2009), umthamo obalulekileyo wokugcina i-ammonia ngaphezu kweetoni ze-10 *** zenza umthombo omkhulu wengozi. Zonke iitanki zokugcina iammonia elulwelo zihlelwa njengeentlobo ezintathu zeenqanawa zoxinzelelo. Ngoku uhlalutye iimpawu ezinobungozi kunye neengozi ngexesha lemveliso kunye nokusebenza kwetanki yokugcina i-ammonia engamanzi, kwaye ucebise amanyathelo athile okuthintela kunye noxakeka ukuphepha iingozi.
Uhlalutyo lwengozi yetanki yokugcina i-ammonia yolwelo ngexesha lokusebenza
Iimpawu ezinobungozi ze-ammonia
I-ammonia yigesi engenambala kwaye ecacileyo enevumba elibi, elinyibilika ngokulula libe yi-ammonia elulwelo. I-ammonia ikhaphukhaphu kunomoya kwaye inyibilika lula emanzini. Ekubeni i-ammonia yolwelo iguquguquka ngokulula kwigesi ye-ammonia, xa i-ammonia kunye nomoya zidityanisiwe kumlinganiselo othile, inokuvezwa kumadangatye avulekileyo, uluhlu oluphezulu luyi-15-27%, kumoya okwindawo yokusebenzela ***** *Ugxininiso oluvumelekileyo yi-30mg/m3. Ukuvuza kwegesi yeammonia kunokubangela ityhefu, ukucaphuka kwamehlo, ulwelo lwemiphunga, okanye ulusu, kwaye kukho ingozi yokutsha kwemichiza.
Uhlalutyo lomngcipheko wemveliso kunye nenkqubo yokusebenza
1. Ulawulo lwenqanaba le-ammonia
Ukuba izinga lokukhutshwa kwe-ammonia likhawuleza kakhulu, ulawulo lokusebenza kwinqanaba lolwelo liphantsi kakhulu, okanye ezinye iintsilelo zolawulo lwesixhobo, njl. njl., igesi yokwenziwa koxinzelelo oluphezulu iya kubalekela kwitanki yokugcina i-ammonia, ekhokelela kuxinzelelo olugqithisileyo kwitanki yokugcina kwaye isixa esikhulu sokuvuza kwe-ammonia, eyingozi kakhulu. Ukulawulwa kwenqanaba le-ammonia kubaluleke kakhulu.
2. Umthamo wokugcina
Umthamo wokugcina itanki yokugcina i-ammonia elulwelo idlula i-85% yomthamo wetanki yokugcina, kwaye uxinzelelo ludlula uluhlu lwesalathiso solawulo okanye umsebenzi wenziwa kwitanki eguqulweyo ye-ammonia. Ukuba iinkqubo kunye namanyathelo awalandelwanga ngokungqongqo kwimimiselo yokusebenza, ukuvuza okugqithisileyo kuya kwenzeka ****** *ingozi.
3. Ukuzaliswa kwe-ammonia yolwelo
Xa i-ammonia ye-liquid igcwaliswa, ukugqithisa akwenziwanga ngokuhambelana nemimiselo, kwaye ukuqhuma kombhobho wokuzalisa kuya kubangela ukuvuza kunye neengozi zetyhefu.
Uhlalutyo lwengozi yezixhobo kunye nezibonelelo
1. Uyilo, ukuhlolwa, kunye nokugcinwa kweitanki zokugcina i-ammonia elulwelo zilahlekile okanye azikho kwindawo, kunye nezincedisi zokhuseleko ezifana neegeji zomgangatho, iigeji zoxinzelelo, kunye neevalvu zokhuseleko zineziphene okanye zifihliwe, ezinokukhokelela kwiingozi zokuvuza kwetanki.
2. Ehlotyeni okanye xa ubushushu buphezulu, itanki yokugcina i-ammonia elulwelo ayixhotyiswanga nge-awnings, amanzi okupholisa okusisigxina okupholisa kunye nezinye izinto zokuthintela njengoko kufuneka, okuya kubangela ukuvuza okugqithisileyo kwetanki yokugcina.
3. Ukonakaliswa okanye ukungaphumeleli kokhuseleko lombane kunye nezixhobo ezichasene ne-static okanye ukubeka phantsi kunokubangela ukutshatyalaliswa kombane kwitanki yokugcina.
4. Ukungaphumeleli kwee-alamu zenkqubo yokuvelisa, i-interlocks, ukunyanzeliswa koxinzelelo oluphuthumayo, i-alamu yegesi evuthayo kunye netyhefu kunye nezinye izixhobo ziya kubangela iingozi zokuvuza ngokugqithisileyo okanye ukwandiswa kwetanki yokugcina.
Amanyathelo okuthintela ingozi
Amanyathelo okuthintela ekusebenzeni kwenkqubo yemveliso
1. Ukuphumeza ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza
Nika ingqalelo ekusebenzeni kokukhupha i-ammonia kwizithuba zokwenziwa, lawula inqanaba lolwelo lomnqamlezo obandayo kunye nokwahlula i-ammonia, gcina inqanaba lolwelo lizinzile phakathi koluhlu lwe-1/3 ukuya kwi-2/3, kwaye uthintele inqanaba lolwelo ekubeni lisezantsi kakhulu okanye phezulu kakhulu.
2. Lawula ngokungqongqo uxinzelelo lwetanki yokugcina i-ammonia engamanzi
Umthamo wogcino lwe-ammonia elulwelo awuyi kuba ngaphezulu kwe-85% yomthamo wetanki yokugcina. Ngexesha lokuvelisa okuqhelekileyo, itanki yokugcina i-ammonia yamanzi kufuneka ilawulwe kwinqanaba eliphantsi, ngokuqhelekileyo ngaphakathi kwe-30% yomthamo okhuselekileyo wokuzalisa, ukuphepha ukugcinwa kwe-ammonia ngenxa yokushisa kwendawo. Ukwandiswa kokunyuka kunye nokunyuka koxinzelelo kuya kubangela ukunyanzeliswa kwitanki yokugcina.
3. Izilumkiso zokuzaliswa kwe-ammonia yolwelo
Abasebenzi abafakela i-ammonia kufuneka baphumelele imfundo noqeqesho lobungcali lokhuseleko phambi kokuba bangene kwizithuba zabo. Kufuneka baqhelane nokusebenza, iimpawu, iindlela zokusebenza, isakhiwo se-accessory, umgaqo wokusebenza, iimpawu ezinobungozi ze-ammonia yolwelo kunye namanyathelo onyango olungxamisekileyo.
Phambi kokuzaliswa, ukunyaniseka kwezatifikethi ezinje ngetanki yovavanyo lomzimba, ilayisenisi yokusebenzisa itanki, ilayisenisi yokuqhuba, isatifikethi sokukhapha, kunye nephepha-mvume lokuhamba kufuneka kuqinisekiswe. Izixhobo zokhuseleko kufuneka zigqibelele kwaye zibe novakalelo, kwaye uhlolo kufuneka lufaneleke; Uxinzelelo kwitanki ngaphambi kokuzaliswa kufuneka lube phantsi. Ngaphantsi kwe-0.05 MPa; ukusebenza kombhobho wokudibanisa i-ammonia kufuneka kuhlolwe.
Abasebenzi abafakela i-ammonia kufuneka balandele ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza zetanki yokugcina i-ammonia yamanzi, kwaye ubeke ingqalelo kwivolumu yokuzalisa engadluli kwi-85% yevolumu yetanki yokugcina xa ugcwalisa.
Abasebenzi abafakela i-ammonia kufuneka banxibe iimaski zegesi kunye neeglavu zokukhusela; indawo kufuneka ixhotyiswe ngezixhobo zokulwa nomlilo kunye nokukhusela igesi; ngexesha lokuzaliswa, kufuneka bangasishiyi isiza, kwaye bomeleze uhlolo loxinzelelo lwelori yetanki, iiflange zemibhobho yokuvuza, njl. njl., itanki yelori yegesi Yibuyisele kwisistim ngokufanelekileyo kwaye ungayikhupheli ngokuthanda kwayo. Ukuba kukho nayiphi na imeko engaqhelekanga efana nokuvuza, yeka ukuzalisa ngokukhawuleza, kwaye uthathe amanyathelo asebenzayo okuthintela iingozi ezingalindelekanga.
Ukuhlolwa okuqhelekileyo kweendawo zokufakela i-ammonia, imilinganiselo kunye neenkqubo ziya kwenziwa imihla ngemihla, kwaye ukuhlolwa kunye nokuzaliswa kweerekhodi kuya kwenziwa.